Wiil 9 jir ah oo laga bad-baadiyey koox afduubatay oo ku rabtay $7,000 + Video - Caasimada Online
Home Warar Wiil 9 jir ah oo laga bad-baadiyey koox afduubatay oo ku rabtay...
Wiil 9 jir ah oo laga bad-baadiyey koox afduubatay oo ku rabtay $7,000 + Video
Beledweyne (Caasimada Online) – Ciidamada booliska magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa maanta soo badbaadiyey wiil uu afduubtay nin burcad ah, kaas oo lacag madax-furasho ah weydiistay qoyska wiilka.
Wiilkan oo da’diisa lagu sheegay 9-sano jir ayaa lagu magacaabaa Saalax Cabdulqaadir Maxamuud, waxaana markii la afduubanayey laga soo daayey Schoolka.
Ninka afduubtay wiilkan oo magaciisa lagu soo koobay Seyad-Cali ayaa watay mooto Bajaaj, waxuuna wiilkan yar ka dalbaday inuu soo tuso dukaanka Aabihiis, isagoo markii uu raacay la aaday jiho kale.
Ninkan ayaa sawirro iyo muuqaallo uu ka duubay wiilka yar uu u xirxiran waxa uu la wadaagay qoyskiisa, isagoo ugu goodiyey inuu dili doono hadii aan lasiin kharashka uu dalbaday.
Guri ku yaalla xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne ayuu ninkaasi geeyey wiilkan yar, waxuuna Aabihiis weydiistay $7,000 oo madax furasho ah, iyadoo mar ay gor gortan wada galena uu ka reebay $2,000, sida uu sheegayo Aabe Cabdulqaadir Maxamuud.
Ciidamada booliska magaalada Beldweyne ayaa soo xiray ninka afduubtay wiilka, waxuuna taliyaha saldhigga galbeed ee Beledweyne warbaahinta u sheegay in cadaaladda la hor geyn doono ninkan.